Ogaden News Agency (ONA) – Guddiyada JOKA, OYSU iyo HAAB oo maanta shir ku wada qaatay Konfur Africa
Guddiyada JOKA, OYSU iyo HAAB oo maanta shir ku wada qaatay Konfur Africa
Madaxa Hogaanka Abaabulka iyo Arrimaha Bulshada ee JWXO mudane Maxamed Cabdi Yaasiin (diirane) oo waayadanba kormeer hawleed ku jooga waddanka Koonfur Africa ayaa manta kulan isugu yeedhay gudiga fulinta ee jaliyada ogadeniya ee koonfur Africa (JOKA) iyo Gudiga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) ee faraca Easten Cape.
Waxaa sidoo kale shirka kaqayb galay madaxa waaxda Arrimaha Bulshada ee OYSU South Africa mudane Cabdiraxmaan Siciid ahna Xoghayaha faracaas. Shirkan oo ahaa mid gaar u ah xubnaha maamulka ayaa loogu magac daray shir shaqo qeexid waxaana looga wada hadlay qodabo aad muhiim ugu ah labada maamul, wuxuuna ahaa shir afar geesood ah.
Waxaa shirka lagu bilowday wacdi diini ah, ka dibna waxaa la gudo galay isbarasho iyo in qof walba la qeexo xilka uu u hayo halganka shacabka S.Ogadenya. Dood wadaag dheer kadib waxaa hoosta laga xariiqay habkii masuuliyiintani kuwada shaqayn lahaayeen waxaana siwayn la isugu raacay in ururka dhalinyarada waxbadan loo fududeeyo oo ku aadan hawlgallada uu qabto.
Hogaanka Arrimaha Bulshada ee JWXO ayaa shirar isdaba jog ah ku qaban haya waddankaas, wuxuuna maalinka barri ah u ballansan yahay muxaadaro qaali ah oo lagu wado in ay dhagaystaan boqolaal dad ah oo maalinkasta ku soo tukada masaajidka Al-Hudaa ee xaafada Korsten oo ah meesha Somalida ugu badan ee gobalka EasternCapekunool ay dagan yihiin.
Wixii faahfaahin ah gadaal ayaan ka soo tabin doonaa.